Gyaw Dee – ၂၀၁၂ မိုးမခသင်္ကြန်သံချပ် | MoeMaKa Burmese News & Media
Gyaw Dee – ၂၀၁၂ မိုးမခသင်္ကြန်သံချပ်
ဂျော်ဒီး၊ ဧပြီ ၉ ၊ ၂၀၁၂
(Illustation – old cartoons from moemaka)
၂၀၁၂ သင်္ကြန်အခါ.. (အတာရေ နဲ့ ဆေးကြကြောကြ..)
သိကြားမင်းကြီး လူ့ ပြည်လာ..(အတာကြပ်တာ ..လက်ပ်တော့ကြီးနဲ့ )
သိကြားမင်းကြီး လက်ပ်တော့ ကိုင်….(.အင်တာနက်ဆိုင် မှာ…. မီးစက်ကိုနှိုး)
လိပ်ဖိုးဖိုးရဲ့ကိုးနတ်ရှင်….(သိကြားမင်းကိုတောင် အရေးမစိုက်)
ရွှေပုရပိုဒ် နဲ့ခွေးသားရေ..သာ..….(ရှေးဟောင်း အစဉ်အလာ… ပြန်ကာသုံးရ..)။
၂၀၁၂ သင်္ကြန်အခါ..တို့ ပြည်မြန်မာ ..(ဘာတွေထူးသတုံး)
ဖုန်းလိုင်းတွေက မကြည်လင်……(၂သိန်းတန်တောင် ရောင်းချင်သေးသတဲ့ )
တို့ ပြည်သူများတောင်းဆိုတာ…(၅၀၀၀တန် ဖုန်းပါ ..လူအများသုံးဖို့ )
၅၀၀၀တန် ဖုန်း အသာနေ…..(ထမင်းရေ တောင် နပ်မမှန်ကြ)
ထမင်းရည်လေးတော့… လျှော့ သောက်ပါ…(ပြည်သူတွေရယ်..ခြိုးခြံမှပေါ့ )
အသက်ကလေး.. နဲနဲ လျှော့ ရှူ ပါ….(ပြည်သူတွေ ရယ်…ခြိုးခြံမှပေါ့ )
ပေါတာကြီးတို့ချမ်းသာအောင်….(ပြည်သူတွေရယ်..ခြိုးခြံမှပေါ့ )
မီးခွန် ရေခွန်..တိုးလို့ ဆောင်….(ပြည်ပကြွေးတွေ ကြေအောင် တဲ့ လား)
ဟေ..လား စိန် တို့ ဝါး…။
ပြည်ပကြွေးတွေ တောင်လိုပုံ.. (.ဆပ်လို့ မကုန်..ဘယ်သူတွေ သုံးသလဲ)၂
ဆပ်မကုန်တဲ့အကြွေးတွေ….(နေပြည်တော်မှာတော့ ..တထီးတနန်း)
နေပြည်တော်ကြီး ရွှေပြောင်ပြောင်…..(တို့ ပြည်သူတွေ ၀မ်းခေါင်ခေါင် ပေါ့ )
၀မ်းခေါင်ပေမယ့်မနေသာ….…(အခွန်အဖြာဖြာ စည်းကြပ်ခံရ….)
အခွန်ရှောင်တဲ့သူဌေးတွေ သာ.. ..(ပိုက်ဆံတွေဟာ…ထားစရာရှိဘူး)
လယ်သမားတွေ…မြေမဲ့ရင်….(တို့ တတွေ မှာ…ဘာပင်စားမလဲ)။
သိကြားမင်းကြီး တငိုင်ငိုင် ….(ခွေးသားရေ မလောက်လို့ မှိုင်..)
ဟေ့..လား..စိန်..တို့ .. ၀ါး…။ဟေ့ လား…ရွှေ တို့ ဝါး..။
မိုး…မိုး..မိုး..လားမောင်တို့ ..(သူခိုး..သူခိုး..သူခိုးများ ..ရှောင်ဗျို့ )
တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာ မခိုးကောင်းပါ..(သန့် ရှင်းကောင်းမွန်…ဘာညာ ..ဆိုလား)
လေ..လေ..လေ..လားမောင်တို့..(အသေ..အသေ..အသေချာ နားထောင်ဗျို့ )
သမတကြီးက…. စကားကြွယ်…(နားထောင် ရတာ..တကယ်ကောင်းသဗျိုး)
အောက်ခြေအဆင့် ဆင့်ဝန်ထမ်းတွေ..(သမတကြီး ပြောတာ.. ကြားကြမဟုတ်လား)
မကြားချင်ယောင် ဆောင်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ..(နားလေးနေရင်..ဆေးမြန်မြန်ကုကြ)
ခေတ်ကြီးကတော့ ပြောင်းနေပြီ…(မြောင်းထဲ မရောက်ခင်..သောက်ကျင့် ပြင်ကြ)
သမတကြီးလဲ..၀န်ထမ်းပါ..(ကိုယ်ပြောတာကို..ကိုယ်မမေ့ နဲ့ )
တရားဥပဒေရဲ့ ….. အထက်မှာ …(ငါက လွဲရင် ဘယ်သူမှ မရှိရ)
တရားဥပဒေရဲ့အထက်မှာ…(.ဖိထားနိုင်တာ..ငွေထုပ်ကြီးလား)
ခေတ်မမီတော့တဲ့ဥပဒေတွေ..(လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြင်ကြပါဦး)၂
လွှတ်တော်ထဲမှာ ငိုက်သူတွေ..(ဒေါင်းတွေ အော်ပြီ…နိုးလော့ ..ထလော့ )
တမတ်တန်းက အချောင်သမားတွေ (ပြည်သူ့ မဲ..မပါ..ရှက်စရာကြီး)
ရှက်စရာကြီးလို့ အသိမှန်..(ပြည်သူ့ အသံ..နာခံကြလော့ )။
ဟေ့ ..လား ရွှေ တို့ ဝါး…။
ဓါတ်ငွေ့သိုက်ကြီး ဖင်ခုထိုင်.. (ဖယောင်းတိုင်လေးမှာ… မှိတ်တုပ်…မှိတ်တုပ်)
မီးခွဲတမ်းကို စောင့် ရတာ..(လေးသင်္ချေ နဲ့ကမ္ဘာ တသိန်း)
ဈေးသစ်ဆောက်ဖို့ ဂွင်သစ်ရှာ…(ကန်ထရိုက်တာ..မင်းမြှောင် ကပ်ဖါး)
သူများမျက်ရည်..ချွေးနည်းစာ.. (မညှာ မတာ..သူတို့ ခြေဆေး)
အသက်ငင်နေတဲ့ မြစ်ချောင်းတွေ…(သူများ တိုင်းပြည် …မီးလင်းဖို့ တဲ့ )
ပိုလျှံနေလို့ ..ရောင်းတာပါ…..(ပြောတတ်လိုက်တာ..သူ့ ပါးစပ်ကြီး)၂
သူ့ ဇနီးနဲ့ သမီးတွေပါ…(စေတနာရှိရင်..အဆစ်ပေးလိုက်)၂
သူခိုး..ဓါးပြနဲ့ပေါင်းသင်းကာ..(တိုင်းပြည့် ရတနာ…ရောင်းမစားနဲ့ )
ပြည်သူ့အသံ…တကယ်နားခံ…..(ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်..ချွေးမသိပ် နဲ့ )
တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်အရင်းခံ……(အမျိုးသား ပြန်လည် သင့် မြတ်ကြစို့ )
(အမျိုးသမီးတွေကော… မပါဘူးလား…တော့ )
အမျိုးသမီးထုက ခေါင်းဆောင်လာ…(အမျိုးသားတွေ မှာ… မသက်သာ ဘူးလား)
အခွင့်အရေး တန်းတူညီ….(တို့ တိုင်း မြန်ပြည်..စည်ပင်ဝပြော)
ဟေ့ ..စိန်လား….. ဟေ့ ..ရွှေလား..(စာဖတ်နေပါတယ်..ဆို)
ဟေ့ လား…စိန်ရော ရွှေရော.. …၀ါး…။ ။
2 Responses to Gyaw Dee – ၂၀၁၂ မိုးမခသင်္ကြန်သံချပ်
marlar on April 10, 2012 at 4:10 am
Very nice. It reflects what is happening in Burma. Thanks, Moe Ma Ka for the post.
yinmoesan on April 16, 2012 at 9:34 am
သက်ဆိုင်ရာတို့ ဒါလေးဖတ်ပြီး ပြင်သင့်တာတွေပြင်ကြပါအုံး။